निगारा फल्स बनाम Foz do Iguaçu सबैभन्दा राम्रो झन्डा के हो? - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: ज्वालामुखी र चिलीको पहिलो यात्रामा चमत्कार
अर्को पोस्ट: तपाइँ अंग्रेजी बोल्नुहुँदा फ्रान्सेली मानिसहरूले किन नाक हाँक्छन् र ब्राजिलियनहरूसँग यसको के गर्नुपर्दछ?
पोष्ट गरिएको6अप्रिल 2019 द्वारा रोमोमो लुकाना
सबैलाई नमस्कार र आज हामी झरनाको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं! र दुई ठूला ठूलाहरू।
कुन राम्रो छ: नियाग्रा फल्स वा फोज डो इगुआ? र तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो?
हामीले सुरू गर्नु अघि, म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यो मैले आधिकारिक डेटा संग तुलना गरेको तुलना गर्दछु। र दोस्रो प्रश्न पर्यटकको रूपमा सामान्य धारणा हो। (मेरो विचार हो!)
दुई भ्रमण गरिसकेपछि मैले जिज्ञासालाई मार्ने निर्णय गरे र उनीहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्न तुरुन्तै एकजुट गरे।
मलाई लाग्छ यो खातामा लिइने पहिलो पहलू हो।
र यहाँ म्याच कठिन छ! नगागा र इगुआकू दुवैको सुन्दरता र एक सुन्दर दृश्य छ। तपाईं दुवै भ्रमण गर्नुहुने सुन्दर दृश्य छाप र उत्कृष्ट अनुभव हुनेछ।
अंकहरू: 1 Foz Do Iguaçu x 1 Niagara Falls।
2- जल भोल्युम (प्रवाह)
यहाँ बिन्दु 2.400 m³ / s को औसत प्रवाह सँग निगारा फल्सहरूमा जान्छ जुन फ्युज डो इग्युबुको मात्रा भन्दा ठूलो 1.756 m³ / s को मात्रा हो।
यहाँ यो टिप्पणिहरु लायक छ कि चर भोल्युम मा वर्ष को समयमा विचार नहीं गरिन्छ। वर्षाको प्रवाहलाई ध्यान दिंदा इगुस्सु फ्लोर उनीहरूको प्रवाह तीन गुणा पुग्न सक्दछ (5.268 m³ / s)। त्यो हो कि ऐतिहासिक चोटी 1983 (सिग्नल द्वारा एक महान वर्ष) मा बेग्लै भयो 35.000 m³ / s। जबकि नियाग्रा फल्सले बाढीको समय (4.800 m³ / s) को प्रवाहलाई दोहोर्याउन सक्छ। अर्को शब्दमा, दुई मोटिब्याकस वर्षको समयमा पानीको प्रवाह बदल्न सकिन्छ। यसैले, एक अर्को भन्दा ठूलो हुन्छ र कहिलेकाहीँ अर्को भन्दा एक भन्दा बढि प्रवाह हुन्छ।
तर चिसो वा बरसात मौसमहरू विचार नगरी औसत प्रवाहलाई विचार गर्नुहोस्। यहां सम्म कि पर्यटकहरु वास्तव मा दिन को समयमा र सूर्य संग वर्षा नहीं देखना चाहते हो, निगाारा ले यो बिंदु लेता छ।
यस बिंदु को परिभाषित गर्न को एक अन्य महत्वपूर्ण कारक हो कि यो केवल मोतीबत्ती को मुख्य भाग को रूप मा विचार गरिरहेको छ, पुरा waterhed नहीं। र यो किन प्रासंगिक छ? किनकि योआपूको पानीले नारगा को भन्दा धेरै ठूलो छ। र सायद किनकि यो धेरै झरनाहरूमा फैलिएको छ यसले मुख्य बिन्दुमा यसको प्रवाह कम गर्दछ।
निगाारा फल्सको बिन्दु
3- झरनाहरूको संख्या (प्रत्येकको कतिवटा पानीको पानी छ?)
यहाँ बिन्दु परिभाषा छ न त कुरा। Foz do Iguaçu ले यो कुरा सजिलै संग लिन्छ। कारण?
Foz do Iguaçu शाब्दिक एक मोतियाबिच स्नान दिन्छ। यसमा लगभग 275 झरनाहरू विश्वमा केंद्रित मोटाइब्याटको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र रहेको छ।
पहिले नै Niara केवल3रहेको छ: क्यानेडियन फल्स, अमेरिकन फल्स र दुलही घाइते।
अब तपाई बुझ्नुहुन्छ किन इगूआउवा जल प्रवाह प्रवाहमा हराउँछ। 275 झरनाबाट सबै पानी जम्मा गर्ने मात्राको अंश बिच्छेदन समाप्त हुन्छ। यदि यो केवल तीनमा समावेश हुन सम्भव थियो भने, त्यसपछि कुराकानी अर्को हुनेछ।
इज्युजुको पोइन्ट गर्नुहोस्।
4- झरनाहरूको उचाई।
यदि हामी पानीको मात्रा र मात्राबारे कुरा गर्छौं भने, झरनाको उचाइको बारेमा कुरा गर्न उचित छैन। नियागारासँग 21 को 34 को अमेरिकी साइडमा उच्च छ। पहिले नै क्यानाडाको साइडमा 57 मिटरको मुख्य खण्डमा होशेसो भनिन्छ।
Foz do Iguaçu, जस्तो कि म भन्छु, धेरै ठूलो छ। गिरिने अविश्वसनीय 82 मीटरमा औसत पुग्छ जुन औसत 64 मिटर छ, जुन यो निगा फाल्स भन्दा ठूलो छ।
5- फल्सको विस्तार
त्यहाँ यहाँ छलफल गर्न केहि पनि छैन
नयनगरले केनेडियन फल्स (X hors) मा 792 मिटर छ, साथै अमेरिकी गिरि र 323 मीटरको 17 मीटर वेइल ब्राडाको अधिक। लम्बाईमा 1.132 मिटरको कुल। (अनुमानित मानहरू किनभने यो एक चर भोल्युम हो)
Foz Do Iguaçu को लागि, झरनाहरू (275 पतनमा थपिएको) को विस्तारले 2.700 मिटर भन्दा कम छ। सबै भन्दा ठूलो को लागि आरक्षण बनाउन शैतानको गला भनिन्छ र ब्राजील र अर्जेन्टिनाको बीचको सीमामा 150 मिटर लम्बाइ र 80 मिटर उच्च हुन्छ।
एक्सटेन्सनमा जित्नका लागी इगेजुजीको लागि बिन्दु।
खैर, यो पर्यटकहरूको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो र समाप्त हुने "टको एक टोको" वा "हेड हेड" ले हेरौं किन:
नियाग्राको उत्कृष्ट आधारभूत संरचना छ, हामी दुई विकासशील देशहरू अर्थात् क्यानाडा र संयुक्त राज्यको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं।
पहिले देखि इग्युबुको पक्षबाट हामी दुई महान दक्षिण अमेरिकी देशहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। ब्राजिल र अर्जेन्टिना।
जम्प-सुरू गर्ने पहिलो पटक पर्यटकको मेरो धारणा हो।
कठिन मार्गको बावजूद, Niagara पहुँच को एक अधिक डिग्री है, जबकि Foz do Iguaçu अभी भी शारीरिक रूप से विकलांग के लिए उपयोग में सुधार की जरूरत है। दक्षिण अमेरिकन साइडको लागि यो विषयवस्तु अझै राम्रोसँग विकास गर्न आवश्यक छ। बसको साथ आइगुसा पार्कमा जान्छ। यद्यपि बस सहज छ र यो भनिएको छ कि भविष्यमा यो स्थायी हुनेछ, यो स्वच्छ ऊर्जाको साथ, (एक विद्युत बस) भन्न सकिन्छ। तर यो भविष्यको लागि परियोजना हो। र केहि पनी स्थायी रूपमा पहुँचयोग्य मतलब छैन। नियागारामा, शारीरिक रूपले असक्षम व्यक्तिको लागि यो सम्भव छ कि सुरक्षित र सुरक्षित मोटाइबिक पहुँच हुनसक्छ, समग्र अनुभवमा सुधार गर्न। र असक्षमका लागि पहुँचयोग्य पनि मानिसहरू असक्षमताको लागि सजिलो बनाइन्छ। त्यसकारण नियागारा जान्छ।
ब्याज को बिंदु: नियाग्रा फल्स।
7- स्थान भ्रमण
अर्को सान्दर्भिक बिन्दु स्थानको यात्रा हो।
Niagara मा हामीसँग छ:
दृश्य, जुन निःशुल्क छ र अघिल्लो वस्तुमा पहिले नै उल्लेख गरिएको छ, पहुँच गर्न सजिलो छ। यसको अतिरिक्त हामीले पावर प्लांटको सुविधाहरूको भ्रमण गरेका छौ जुन सबैले3मा छन्। हामीसँग स्काइलन टॉवरको दृश्य पनि छ जुन तपाईंलाई फल्सको माथिबाट हेर्न अनुमति दिन्छ। जिप रेखा (जिपलाइन)। र मुख्य: डुङ्गाको सवारी जो हर्नब्ल्लावर द्वारा वा ह्यासेसो फल्सको खुट्टामा जान्छ जुन मिचको धुम द्वारा हुन सक्छ। सम्भवतया दुवै देशहरूमा जानुहोस्। क्यानाडाको छेउमा, मैले सोधे कि यो धेरै कूलर थियो।
यसबाहेक हामीसँग पनोरमिक हेलीकाप्टर उडानहरू र क्षेत्र नजिकको मनोरञ्जन पार्क छ।
Foz do Iguaçu मा हामीसँग छ:
परिदृश्य दृश्यहरू। हो, मोटाइबिक जटिलताले धेरै हेराइहरूमा धेरै विचारहरू प्रस्तुत गर्दछ। स्पष्टतः सर्वोत्तमहरू पातहरूको पार्क भित्र छन्, तर यो दूरीमा केही झरनाहरू हेर्न पनि सम्भव छ। तथापि मुख्य दृश्यावलोकनका लागी पार्कमा प्रवेश गर्न र शुल्क तिर्न आवश्यक छ।
हाम्रो साथमा हेर्नुको अतिरिक्त, पानोरामिक हेलीकाप्टर उडान, पैराचुट जम्प, जुन यो मा निर्धारित हुन सक्छ:
https://www.skydivefoz.com/ र इगगाजूको दृष्यको साथ यो त्यहाँ बाट अचम्मको अनुहार हुनुपर्छ। हामीसँग धेरै जनावरहरू छन्। पार्क पर्यावरण को संरक्षण को हो, यसैले धेरै फूट र वनस्पति शामिल छ।
र दाँया हामीसँग अर्को पार्क छ जुन बर्ड पार्क हो। यो पक्षी र जनावरहरूको लागि आश्रित र पशु व्यापारबाट बचाएको आश्रयको रुपमा सोचेको थियो। यो एक सुन्दर पार्क हो र जनावरहरू आउन र जब चाहन्छन् को लागी खुला। तर ती व्यक्तिहरू अब जंगलमा फर्कन सक्षम भएका छन् त्यहाँ छन् र हेरचाह र खानका लागि।
म पनि विभिन्न पर्यटन पानी भित्र राफ्टिंग रूपमा, rappelling थप्न थियो, र छोड्न कि Macuco सफारी दुवै (ब्राजिलियन पक्ष) र अर्जेण्टीनी पक्ष र डुङ्गा महान् साहसिक छ। यो रमाइलो छ र दुई फ्लाइटमा जानुहोस्। र तिनीहरूले साना जहाजहरु पानी मार संग एड्रेनालाईन को भावना हो किनभने उच्च छ। तल अर्जेण्टीना पक्षबाट बनेको भिडियो हो।
र अन्तमा म यूसुना डी इटियापू (ब्राजील र पेरुग्वे बीच बिनिटिक) लाई भ्रमण गर्दछु जुन संसारमा सबैभन्दा ठूलो थियो। तर यो अहिले चीनमा तीन गोर्न्स लान्ड (तीन महासागरको बांध) द्वारा बिरुद्ध दोस्रो ठूलो हो। (एकपटक फेरि 14.000 मेगावाट र 22.500 मेगावाट संग तीन गोरेज लान के साथ औसत ऊर्जा उत्पादन डेटा, Itaipu पर विचार करें।
कुनै पनि राम्रो तरिकाले नियागारा फाल्स को तीन संयुक्त मिलहरु को 4.9 मेगावाट भन्दा राम्रो।
अधिक पर्यटक आकर्षणको लागि पोइन्ट डो इगुआउजु जान्छ।
8-Fauna र Flora (वातावरण)
यो विषयले क्षेत्रको जैव विविधता समावेश गर्दछ।
Niagara मा, Foz Do Iguaçu को तुलना गर्दा पर्यावरण विविधता लगभग निलो छ।
अधिकतममा, नियागारा क्षेत्रमा हाम्रो माछा र केहि पक्षीहरू छन्।
Foz पहिले नै Iguaçu हामी छ, चरा, माछा, रूखहरू, सरीसृप, amphibians, कीरा ... हामी स्थानको बारेमा Rainforest र ट्रपिकल देश छ, जो ब्राजिल, मा सबै भन्दा ठूलो संरक्षण पर्यावरणीय पार्क को एक संरक्षण जहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ के।
यो पर्यटक, macaws, Anacondas, toucans, कछुवा संग संपर्क फल्स वा चरा पार्क को ट्रयाक भनेर चरा को भीड बन्द छ सम्भव पनि छ।
यसैले, जैव विविधता को बिंदु Foz गर्छ Iguaçu मा जान्छ।
9- रेस्टुरेन्ट र बारहरू।
दुवैको नजिक हुन्छ हामीसँग राम्रो रेस्टुरेन्टहरू र बारहरू छन्। दुवैमा हाम्रो राम्रो सेवा छ। तर यहाँ म एक आरक्षण गर्दछु र हेर्नुहोस् कि तपाईं मेरो साथ सहमत हुनुहुन्छ। हुनत हामी विभिन्न व्यञ्जनहरु को4प्रकार तुलना गर्दै: (संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा-ब्राजिल र अर्जेन्टिना) भएको बिंदु दक्षिण अमेरिका दिइएको हुनुपर्छ। यस पछि हामीसँग छ: दक्षिण अमेरिकन मसालेको सम्पत्ति। ब्राजिलियन खाना, दाखमद्य र अर्जेण्टीनी वास्तविक बारबेक्यू दुई (अर्जेन्टिना र ब्राजिल)। एली अझै पनि पैरागुआन क्यासिनो जसले रात बनाउँछ र अधिक हिसाब हुन्छ।
यस सन्दर्भमा, बिन्दु इग्युबुको जान्छ।
10- उत्तम इंद्रधनुष गठन गरियो।
यहाँ, विवाद फेरि क्यू हो। हिँड्ने पानी घुमाएर पानीको पालहरू लगभग एक स्थायी गठन इन्द्रधनुष छ। अवश्य यो मौसममा चन्द्रमा छ वा होइन निर्भर गर्दछ। तर तल Belvederes को फोटोहरू हेर्नुहोस् र आफ्नो निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। यस वस्तुमा म इमानदार रूपमा प्रतिक्रिया बनाउन सक्दैन। Lookouts रणनीतिक रूपमा यी स्थानहरूमा प्राप्त गर्न सजिलो छ। सम्झना छ कि दुवै मा त्यहाँ पानी को स्प्रे हो जुन तपाईंको उपकरण गीला गर्न सक्छ। पानीको प्रतिरोधी केहि राम्रो छनौट गर्नुहोस्।
यहाँ म दुई मोटिब्रेटको टेक्निकल ड्रान्च गर्न बाध्य छु। बत्तीबारीको पूर्णतामा बसोबास गर्नुहोस्!
Foz do Iguaçu नियाग्रा झरना
1-भिजुअल X X
2- जल भोल्युम X
3- झरनाहरूको संख्या X
5- मोतिथिबत्तीको विस्तार X
7- पर्यटन भ्रमण X
8- जैव विविधता X
9- रेस्टुरेन्ट र बारहरू X
10 - इंद्रधनुष X X
कुल अंकहरू 8 4
र यसैले उत्कृष्ट झरना शीर्षकको साथ रहन्छ ...
Foz do Iguaçu 8 प्रश्नहरु को 10 मा बेहतर punctuating को लागि, Niagara Falls को लागि4प्रश्नहरु को 10 को विरुद्ध। हो त्यहाँ दुई प्राविधिक ड्रान्हरू थिए, तर अन्त्यमा इगुआउगुले यो तुलना जित्यो।
यदि तपाइँ मनपर्यो भने, छोटो र यो पोष्ट साझेदारी गर्नुहोस्।
र यो टिप्पणीमा छोड्नुहोस् यदि तपाईं थप्न वा प्रश्नहरू परिवर्तन गर्नुहुनेछ।
एक गलीचा र तपाईलाई अर्को पटक भेट्नुहुन्छ। (I.e.
कसरी अर्जेन्टिना ब्राजिल क्यानाडा संयुक्त राज्य Foz do iguaçu शैतानको गला नियाग्रा झरना